टिकटकलाई अर्को तनाव, माइक्रोसफ्टलाई बेच्ने तयारी ! - Khabar Break | Khabar Break
टिकटकलाई अर्को तनाव, माइक्रोसफ्टलाई बेच्ने तयारी !
चिनियाँ कम्पनिको चर्चित भिडियो सेयरिंग एप एकअप्ची अर्को विवादमा पर्दै गएपछि अब अमेरिकी घेराबन्दीमा परेको देखिएको छ ।
विश्वकै ठुलो बजार भारतले टिक टकमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि अब अमेरिका जापानसहितका देशले टिक टकलाई प्रतिबन्धमा लगाउने बारे विचार गरिरहेका छन् ।
यसैबीच अमेरिकाले टिकटक अमेरिकी कम्पनिलाई बेच्न दबाब दिएको मिडिया रिपोर्ट आएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले टिक टक निर्माण गरेको चिनियाँ कम्पनि बाइटडान्सलाई टिक टकको अमेरिकी अप्रेसन बिक्रि गर्न एक अर्डर साइन गर्नसक्ने सिएनएनले उल्लेख गरेको छ । अमेरिकाले सुरक्षाको कारण देखाउदै टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने भन्दै राष्ट्रपति ट्रम्पमाथि दबाब बनाउदै आएका छन् ।
चारैतिरबाट दबाब बढेपछि टिकटक निर्माण कम्पनि बाइटडान्सले आफ्नो मेजरिटी सेयर बिक्रि गर्ने बारे छलफल शुरु गरको छ ।
मिडिया रिपोर्टका अनुसार माइक्रोसफ्टले टिकटकको सेयर किन्न छलफल थालेको न्यूयोर्क टाइम्सले उल्लेख गरेको छ । माइक्रोसफ्टले आधिकारिक रुपमा यसबारेमा टिप्पणी नगरेपनि टिकटकलाई किन्न माइक्रोसफ्ट अगाडी बढेको अमेरिकी मिडियाले उल्लेख गरेका छन् ।